Factory Factory - Mpanamboatra sy mpamatsy vokatra China
asidra sucinika miorina amin'ny bio / amérika miorina amin'ny bio
Loharanon'ny teknolojia: famokarana asidra succinika biolojika amin'ny teknolojia fanamasinana mikraoba: ny teknolojia dia avy amin'ny vondrona mpikaroka zhang xueli mpikaroka "institiota momba ny teknolojia mikraoba indostrialy, Akademia siansa momba ny siansa (tianjin)". Ity teknolojia ity dia mandray ny tsiranoka vita amin'ny laoniny mahery indrindra eto amin'izao tontolo izao. Endri-pamokarana: ny akora dia avy amin'ny siramamy starch azo havaozina, ny fizotry ny famokarana mihidy manontolo, ny index ny kalitaon'ny vokatra dia mahatratra ny ...
Sitrana simika miorina amin'ny bio (WSA)
Toetra mampiavaka azy: ny sôdiôma succiate dia granule na vovoka kristaly, tsy misy loko fotsy, tsy misy fofona ary manana tsiro umami. Ny faran'ny tsiro dia 0,03%. Milamina amin'ny rivotra izy ary mora levona anaty rano.
Tombony: Mampiasa siramamy starch azo havaozina izy io ho toy ny akora hamokarana mivantana ny sôisinina succôdrika amin'ny alàlan'ny fanamasinana microbial. Vokatra biomassa madio izy io; dingana maitso madio tsy misy fandotoana izy io, ary azo antoka sy azo itokisana ny kalitaon'ny vokatra.
1,4-butanediol miorina amin'ny bio dia vita avy amin'ny asidra succinika miorina amin'ny bio amin'ny alàlan'ny fizotrany toy ny esterification, hydrogenation, ary ny fanadiovana. Mahatratra 80% mahery ny atin'ny bio-carbon. Ny fampiasana 1,4-butanediol miorina amin'ny biolojika ho akora fototra, ny plastika biodegradable PBAT, PBS, PBSA, PBST ary vokatra hafa novokarina dia plastika azo zahana biomass-dégradable ary mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra atiny biomass international.